Thenga Isikibha Samadoda Esifushane Sleeve Bandana Phrinta I-T-Shirt Yabesilisa Abasha - Ukuhanjiswa Kwamahhala Futhi Akukho Intela | WoopShop®
Isitayela Sleeve: Imikhono emifushane
Kuyinto enhle kakhulu futhi enhle. Oda osayizi abambalwa ngaphezulu
Sonke iSuper siyabonga ngezimpahla
Ngithathe usayizi M ngaya ku-167 wami. Ukusetshenziswa okuncane kakhulu kuvela, kepha, manje sekuyimfashini. Kalula, ukuphrinta kwekhwalithi. Ngenelisekile, ngiyeluleka.